Wax ka qabashada Spam xun - Ku Dhaqanka Cimilada
Dhibaatooyinka looma hayo diiwaanka ugu fiican. Waxay sooman yihiin, oo ka dhigayaan tiradabooqdayaasha bini'aadamka ee bogga internetka. Michael Brown, Maamulaha Guusha Macaamiisha Sare ,waxay ka digaysaa in bots ay u sahlan tahay in lagu kalluumaysto goobaha nugul iyada oo ujeedadu tahay inay weerarto, nidaamyada faallooyinka faallooyinka, iyo keenaanjahawareerka hababka warbixinta taraafigga - bravuris 205. Qaadashada gudbinta xaasidnimada ah waxay noqoneysaa dhibaato halis ah, iyo isbedelka Google ayaa muujinayain dhibaatadu ay kor u kacdo.
Googlebot waa boot wanaagsan
Ujeeddada ugu weyn ee botigu waa inuu baabi'iyo hawlaha iyo isku dhejiyo sidii booqde. Waxay xoqeenkoodhka ilaha, ururinta xogta, iyo fulinta hawlaha si ay uga jawaabaan waxa ay ka helayaan. Si kastaba ha noqotee, sida ugu macquulsan ee uu u dhawaaqo xaasidnimo, ma aha dhammaantoodxun. Boostada Google waxay ogaaneysaa in ay ogaadaan dadka isticmaala waxayna caawisaa bogagga safka ee SERP. Qodobbada qaarkood waxay ka faa'iidaystaan ​​arrintan waxayna ku shaqeeyaan isticmaalkoodaWakiilada been-abuurka ah waxay u egtahay inay ka soo jeedaan bot this.
Dhibaatooyin xun iyo gudbin spam
Dhibaatooyin xun ayaa ka dhexjiraya boggaga internetka, waxay xadaan macluumaadka isticmaalaha, riix khiyaanada sharci ahaanxayaysiisyada, iyo faahfaahinta warbixinnada ay sameeyeen Google Analytics. Qodobbada ugu dambeeya liistadaan waxay leedahay saameyn badan oo loogu talagalay websaydh. Natiijadulaga bilaabo codsiyada kala duwan ee spam gudbinta. Tusaale ahaan, waxay baddalaan macluumaadka taraafikada sicir-bararka ay abuuraan, khiyaanodadka isticmaala si ay u soo booqdaan goobaha ka muuqda wargeysyada Google Analytics, kuwaas oo u oggolaanaya inay abuuraan xiriirro dib udhac ah. Tan iyo markii ay soo baxaan sidagaadiidka sharciga ah, waxay maamulaan si ay u qariyaan soo-jeedinta.
Spam u gudbinta ayaa leh boqolkiiba 100 xawaare sare, iyo wakhti xadidan bogga, taas oo u egtahay mid aad u xunxogta warbixinta. Sidaa darteed, badeecada ugu dambaysa ee warbixinnadani badankoodu waa kuwo aan sax ahayn. Sanado badan, dhirbaaxadu waxay noqdeen kuwo aad u sarreeya..
Hackers waxay isticmaalaan botnets si ay u sameeyaan weeraro adag. Botnet waa shabakad ah robotstaas oo adkeyneysa raadinta iyo liiska madhxinta IP-yada. Way adagtahay in la ilaaliyo website-ka marka ay isticmaalaan Adeegga Diidmada Adeegga.Marka mid ka mid ah uu roogo ama ka xayiro mid, dhowr ka mid ah dadka kale ayaa kora.
Inta badan bogagga intarnetku waxa ay heystaan ​​koodhka Google Analytics iyaga oo ku adag. GudbintaGoobaha ayaa xoqin kara code-yada gaarka ah ee laga helo koodhka iyo isticmaalka si aad ula socoto goobta. Laga soo bilaabo markaa, waxaa suurtogal ah in loo diro macluumaadkailaa GA, iyada oo aan la booqan. Waxay ka faa'iidaystaan ​​Google Analytics Cabbiraaddo, kaas oo aan kala-takoorin xogta soo socotaiyada.
Joojinta Spam Referral Spam
Isticmaalayaasha ayaa iska indho-tiri kara jihooyinka galmada waxayna dib u soo celiyaan sharafnimada macluumaadka loo adeegsado taraafikadawarar Hostname Filter waa hal dariiq oo ku saabsan arrintan, maadaama ay hubiso in ay ku xisaabtamayso macluumaadka laga helo bogaga internetka ee saxda ah. Iyada oo sidaasqiyaasta meel kasta, jihooyinka dhammaan jinsiyada, horey u socdaan, ha ka tarjumaan warbixinta falanqaynta. Ma aha xal joogta ah, sida jilayaasha loo heloDabaysha tallaabooyinka miisaanka lagu soo rogay.
Dhageysiga Spam u gudbinta caadiga ah
Kiisaska intooda badan, boggaga internetka waxay ku wargaliyaan dhaqdhaqaaqa gawaarida si toos ah goobta. Kuwani way badan yihiinlagu xakameyn karo iyadoo la adeegsanayo habab dhaqameedka ah ee xayiraadda spam. Haddii qofku doorto inuu isticmaalo Google Analytics, nidaamku wuxuu noqon karaa mid dheer oo dhamaystiran. Anbarnaamijka joojinta automatic ah waa Sucuri Websaytka Damiinka, oo leh ikhtiyaarka sharciyada caadada ah ee qofka isticmaala.
qarnigii 21aad waxa uu keenay arrin badbaado la adkeeyay. Mararka qaarkood waa wax dhib ahinaad la macaamisho spam. Si kastaba ha noqotee, dadku waa inay bilaabaan inay caadaystaan ​​inay qaadaan tallaabooyin ay ku hubinayaan inay ilaaliyaan xogahooda iyaga oo dhan.